Ubuntu သုံးစွဲနေသူတွေနည်းများနေသလား? — MYSTERY ZILLION
September 2011 edited September 2011 in Ubuntu
<font color="green">ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပေမဲ့ Linux ကိုသုံးစွဲတာနည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုဘာကြောင့်နည်းရတာလည်းဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့မှ software ပိုင်းကအဓိကကျမယ်ထင်တယ်။
window က အလကားမရဘူးပြောပေမဲ့ သုံးဖြစ်နေတာပဲ software တွေကလည်းရှယ်ပဲပေါမှပေါ။
Linux မှာ ထားပါတော့Ubuntu မှာဘယ်လောက်ပဲ software တွေပေါတယ်ပြောပြောအလုပ်ကမမြန်ဘူးဗျ။
စသုံးတဲ့လူအတွက်ပေါ့နော်...။ internet connection ရှိရင် လွယ်လွယ်ရနိုင်ပေမယ့် ဒီအတိုင်းဆိုမလွယ်ဘူးဗျ။ <a href="package.ubuntu.com">http://package.ubuntu.com"</a>;
မှာယူနိုင်ပေမဲ့ အများကြီးဗျ။ package တစ်ခုကျန်ရင်သွားပြီ။ ပြန်သွားပြီးရှာ အချိန်ကုန်တယ်ဗျ။
restricted package တွေကအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့...စသုံးတဲ့လူတွေကျဘယ်သိနိုင်မလဲ။ ကျွန်တော်
ပြောနေတာကလဲသိပ်မသိလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါ။ လွယ်မဲ့နည်းလမ်းတွေတော့ရှိမှာပါ။ စသုံးကာဆိုစိတ်ကုန်သ
လားမမေးနဲ့။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းသည်းခံလိုက်ရင် လက်မလွှတ်နိုင်တော့ဘူးဗျ။ Linux ကိုလူတိုင်းသုံးစေ
ချင်တယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ အရင်ရင်ကအစ်ကိုတွေရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလဲ ဘာသာပြန်
နေကြတဲ့ Constributor အရေအတွက်ကတော့အားရစရာပဲဗျ၀င်တာကြည့်ပါတော့ <a href="translations.launchpad.net"><font size="100" color="red">http://translations.launchpad.net</font></a>; ကျွမ်းကျင်နေသူ
September 2011 Moderators
Ubuntu ကို Offline Packages တွေပါပြီးသား Super OS လိုမျိုးဟာတွေရှိပါတယ်။ Offline Packages တွေတစ်ခါထဲသွင်းပြီးသားတွေပါ။
အခုနောက်ပိုင်း 11.04 လောက်ကစပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Package ကို Ubuntu Software Center မှာ Name ရိုက်ပြီးတော့ ရှာလို့ရပါပြီ။ ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ Google မှာရှာ Terminal ကနေသွင်းတာတွေလုပ်ရပါတယ်။ အခုဟာက Internet Connection ကောင်းရင် One Click Installation လုပ်လို့ရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ArgoUML လိုမျိုးကတော့ Terminal ကိုသုံးပြီးတော့မှပဲ Install လုပ်လို့ရမှာပါ
ကျွန်တော်လည်းအရင်ကသုံးတယ် နောက်တော့ သုံးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး အဓိက package ​တွေက offline ရပေမဲ့ ဒေါင်းရတာ စိတ်ရှုပ်စရာကြောင့်ပါ
I want to download all of ubuntu software packet for using offline. Is there any where to collect the software at one place like Android Market?
ufolink you can download softwares from this link >> Linux softwares